अध्ययन र अध्यात्म - TGuff
Fri Aug 27 1	Comments
मेरा धेरै साथी अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। अहिले उतै घर किनेर बसेका छन्। पढाइ राम्रो भएकाहरू यतै काठमाडौंमा छानेका जीवनसाथीसँग सेटल भएका छन्। अनि आफ्नो क्षेत्रमा अग्रणी व्यावसायिक परिचय बनाएर समाजमा सानको जीवन बाँचिरहेछन्। अरूले कसरी लिन्छन्, थाहा छैन। मलाई लाग्छ, अध्ययनले मान्छेको जीवन बदल्छ। संसार फेर्छ। मोडल­हिरोइनको मेरो परिचय बन्नुका पछाडि पनि अध्ययनको भूमिका धेरै छ। कहिलेकाहीँ यसो सोचमा हराउँछु। म आफैंलाई प्रश्न गर्छु, काठमाडौंमा नजन्मेर उपल्लो डोल्पामा जन्मेको भए के हुन्थेँ होला? पढाइ कस्तो हुन्थ्यो? अनि मेरो शिरमा मिस नेपालको ताज आइपुग्थ्यो होला? काठमाडौंको राम्रो परिवारमा जन्मेकोमा भाग्यमानी ठान्छु, किनभने मैले राम्रो अवसर पाएँ, शिक्षाका लागि।
सानो छँदा मलाई किताबको महत्व थाहा थिएन। कोर्सका ‘किताब’ मात्र किताबजस्तो लाग्थ्यो। अलि बुझ्ने भएपछि कमिक्सका किताब मेरा हात परे। रमाइलो लाग्थ्यो कमिक्सको संसारमा हराउन। अंग्रेजीको आर्चिज, टिनटिन, टम एन्ड जेरी र हिन्दीको बेताल मेरा प्यारा कमिक्स थिए। किताबलाई इज्जत र मान गर्नुपर्छ भनेर त खुब सुन्थेँ। गर्थें पनि। किन इज्जत गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ थाहा थिएन। ती स्कुले दिनमा मेरो रोमान्स बेताल र टिनटिन कमिक्स–पात्रसँग चलेको थियो। कोर्सका किताब जाँच पास गर्ने माध्यममात्र थिए। कोर्सका किताबसित सर्टिफिकेटको लालचबाहेक अरू केही थिएन।
त्यसबेला म ११–१२ वर्षकी थिएँ। नजिकका आफन्त र घरका अन्य सदस्यले मोटामोटा किताब पढेको देख्थेँ। भित्रैदेखि इर्ष्या लाग्थ्यो। उनीहरूजस्तै हुन मन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म अरूको देखासिकी गर्दै किताब समातेर बस्थेँ। खासमा त्यो पढाइ थिएन, इर्ष्या थियो। त्यसैबेला मैले थाहा पाएकी थिएँ, संसारमा कमिक्सबाहेक उपन्यास पनि हुन्छन् भनेर।
यो स्कुले जीवनको अन्त्यतिरको कुरा हो। त्यसताका म उपन्यास पढ्न खोज्थेँ। छसात पानाभन्दा पढ्ने धैर्य मसँग हुँदैनथ्यो। मेरो ध्यान अन्तै जान्थ्यो।
पछि, पढ्न नसकेकोमा निरास र दुःखी हुन्थेँ। यसरी म कैयौंपल्ट निरास भएँ। त्यतिबेला लाग्थ्यो, आखिर के हुन्छ किताबमा? कसरी सक्छन् मान्छेहरू किताब पढ्न? बिस्तारै उपन्यासका ‘चाइल्ड भर्सन’ र छोटा कथाका पुस्तक मलाई मनपर्न थाले।
मेरो स्कुल सकियो। म कलेज भर्ना भएँ। यो सन् १९९२–९३ तिरको कुरा हो। मैले घरकै पुस्तकालयमा भेटेँ, सिड्नी सेल्डनका उपन्यास। सिड्नी सेल्डनका उपन्यासले मेरो मनै हर्न थाल्यो। पहिले त सेल्डनबारे केही थाहा थिएन। उनको उपन्यास पढ्न सजिलो लागेर मात्रै पढ्थेँ। त्यसमध्ये इफ टुमरो कम्स, द अदर साइड अफ मिडनाइट र रेज अफ एन्जेल्स।
त्यो बेलाको मेरो एकांकीपन देखेर बुवाआमा निकै पीर पनि मान्नुहुन्थ्यो। बुवाआमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘झरना, कति किताब पढिराखेको? कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग पनि जानुपर्छ। सामाजिक हुन सिक्नुपर्छ।’ तर खै ती कुरा कहिल्यै महत्वपूर्ण लागेन। थाहा छैन, किन। किताब सिध्याएपछिको क्षण एकदम खुसी हुन्थेँ म। लाग्थ्यो एउटा लक्ष्य प्राप्त गरेँ। पात्रहरूलाई नजिकको साथी बनाएँ र गहिराइबाट चिनेँ सबैलाई।
पछि मैले आफैँलाई प्रश्न गर्न थालेँ–
जब अध्यात्मलाई जीवनमा आत्मसात गर्न खोजेँ, म आफैंसँग गलत सावित भएँ। थाहा पाएँ — बौद्धिक ज्ञानको महत्व तबमात्र हुन्छ जब त्यो जीवनमा आत्मसात गरिन्छ। र, किताबको अधिकतम क्षमता बुद्धिको तहलाई तिखार्नेमात्र हो। फगत बौद्धिकताको केही मूल्य हुँदैन। मेरो अनुभवको एउटा सत्य — खोक्रो बौद्धिकताले जीवनमा कुनै परिवर्तन पनि ल्याउँदैन। विश्वविद्यालयमा अध्ययनको तहहरू भएजस्तै मान्छेको दिमागमा बुद्धि र त्यसभन्दा माथि पनि तह भएको मलाई स्पष्ट अनुभव छ। घरिघरि आफूलाई त्यो दिमागी तहभन्दा माथि पाउँछु। त्यो अवस्थामा बुद्धिको कुनै काम वा अर्थ दुवै हुँदैन। तैपनि एउटा बुझाइमा स्पष्ट छु — अध्ययनले जीवनयापन सहज बनाउँछ, जीवनको मार्गदर्शन गर्छ।
झरनाको अरु लेख पढ्नुहोस्
One thought on “अध्ययन र अध्यात्म”
सुभक महतो says:
तपाईले लेख्नु भएको अध्ययन र अध्यात्म बडो रोचक लाग्यो । साइत यस्तै यस्तै घटना मेरो जीवनमा पनि मेल खाएर होला ? हो तपाई को जीवनमा घटेका यस्ता घटनाहरु सबै मेल नखान सक्छ तर, केही प्रतिशत मेल खान्छ नै ।
वास्तवमा तपाईले अध्ययन नगरिकन कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भए तपाईले यथार्त जीवनसंग भेटघाट हुने थिएन कि । जुन मानिसले यथार्त जीवनसंग भेटघाट हुन्छ त्यसको नै सहि जीवन हो । त्यो कुरा तपाईले आफै पुष्टि गर्नु भएको छ कि मेरो जीवनको सबै देनहरु किताबका खुड्किलाहरु नै हुन् भनेर ।